News20 Media -
१५ वर्षकि भान्जीलाई मामाले नै उडाए,एक महिनादेखि मामाभान्जी बे’प’त्ता(भिडियो हेर्नुस) मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका ९ घर भएकी १५ वर्षकि सुमना दनुवार मामा पर्नेसगँ फरार भएकी छिन । उनी इन्डिया घरमा भएका २४ वर्षका भरत वि.क सँग फरार भएकी हुन । १ महिना देखी छोरी हराएको भन्दै सुमनकी आमा वसन्ती दनुवार मिडियामा आएकि छिन । छोरी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दै आएको आमा वसन्तिको भनाइ छ । भरतको घर इन्डिया भएनी २ वर्ष अघि देखि उनी दिदिको घरमा बस्दै आएको बसन्तीले बताएकी छिन् । छोरी सुमनाको सानै उमेर भएकोले आफुले कहिले संका नगरेको आमा वसन्तीले बताएकी छिन् । भरत पहिले देखी आफ्नो घर आउने जाने गरेको आमाको भनाइ छ । घरमा आउँदा नि मामा भान्जी साइनोले नै बोल्ने गरेको आमा वसन्तीले बताएकी छिन । फरार हुनु भन्दा अघि बिहे खानको लागी पुर्व झापा गएकि वसन्ती कएहि दिन उतै बस्छु भनेर गएको भएता पनि केटाले फोन गरेको गरै गरे...
बोरा बोकी हिँडिरहेका ३ जना प्रहरीलाई देख्नासाथ भागे, बोराको सामान देखेर उड्यो प्रहरीको होस मकवानपुर २२ पौष । मनहरी गाउँपालिका-९ खरंगाबाट करिब ४५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजा जस्तो देखिने वस्तु सहित २ जनालाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा राक्सिराङ गाउँपालिका-२ बस्ने ४२ वर्षीय भक्त बहादुर थापा मगर र मनहरी गाउँपालिका-५ बस्ने ४१ वर्षीय हिरालाल गुरुङ रहेका छन् । बोरा बोकी हिँडिरहेका ३ जनाले ईलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीबाट खटिएको प्रहरीलाई देख्नासाथ बोरा फाली भाग्न खोज्दा थापा र गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएर बोरा जाँच गर्ने क्रममा उक्त गाँजा फेला पारी उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । हाल फरार रहेका १ जनाको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । यसैगरी , कास्की,कास्की जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रित लागूऔषध सहित ३ जनालाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा मकव...
पूर्व प्रहरी समेत रहेका एक पुरुषले गरे कसैले सोच्नै नसक्ने हर्कत, यस्तो कुरा सुनेर सबैलाई अचम्म बनाउँछ (भिडियो) पूर्व प्रहरी समेत रहेका एक पुरुषले युट्युवरलाई झुक्याउने प्रयास गरेका थिए । श्रीमतीवाट म समस्यामा परेँ भन्दै मिडियामा आएका थिए । अहिले उनकै पर्दाफास भएको छ । एक युवतीलाई झुक्याएर दोस्रो विवाह गरे । उनलाई म अविवाहित हुँ भनेर विवाह गरेका थिए । पहिलेको श्रीमतीवाट दुई छोरी जन्मिएपछि उनले ति श्रीमती र दुई सन्तानलाई वास्ता गर्न छोडे । श्रीमतीले अहिले दुई सन्तानलाई एक्लै हुर्काएकी छन् । तर यता अविवाहित छु भन्दै विवाह गरेकी ति श्रीमतीले छोरा सहित हराएपछि उनी मिडियामा आएका थिए । उनले श्रीमतीलाई अनेक आरोप लगाउँदै सबैलाई झुक्याउने कोशिष गरेका थिए । तर अहिले उनकै यस्ता पोल खुले जुन कुरा सुनेर सबैलाई अचम्म बनाउँछ । प्रहरीको जागिरे हुँदै उनी मलेसिया पुगेका थिए । मलेसियामै छँदा श्रीमती सम...
बुहारी बनेको ९ वर्षपछि पेट दुखेर अस्पताल जाँदा सपरिवार छक्क, चिकित्सकको समेत होस उड्यो ! एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अचानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्यान्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्रोमोसोम पुरुषको हुन्छ । यी महिला केहि महिना अघि पेट दुख्ने समस्या लिएर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस क्यान्सर अस्पताल गएकी थिइन् । उनको उपचार गर्ने डाक्टरले उनलाई कस्तो रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकेनन् । क्यान्सर अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर अ...
काठमाडौंमा ‘लिभिङ टुगेदर’ बसेका युवा-युवती मृत फेला काठमाडाैंमा दुई युवायुवती मृत फेला परेका छन् । बौद्धको फैकास्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकसँगै बस्दै आएका खोटाङको साकेला गाउँपालिका-२ रतन्तछाकी २२ वर्षीय युसुना राई र संखुवासभाका २५ वर्षीय अनिश जिमी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक दुबैको शरीरमा चो -ट देखिएको छ । उनीहरुको धा-रि-लो ह-ति-या-र प्र-हा-र गरी ह -त्या गरिएको हुनसक्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुमान छ । राई र जिमीसँगै बस्न थालेको दुई-तीन हप्तापछि कोठामै मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बिहे नगरी‘लिभिङ टुगेदर’मा बसेका उनीहरु पब्जी खेल्नेक्रममा नजिकिएका थिए। घटनामा कुनै तेस्रो व्यक्तिको सं’लग्न’ता छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ। गएराति अनिस र युसिना दुबै मासु र चिउरा खाएर सुतेका थिए। ‘उनीहरू धेरैजसो पब्जी खेल्ने गर्थे। खेल खेल्दा हा’नहा’न, मा’रमा’र भन्न...
कमलाकै स्थानमा मृ’त भेटिएका ब्यक्तिको सु’सा’इड नो’ट भेटियो,आ’त्माह’त्या कि ह’त्या(भिडियो हेर्नुस खोटाङकि कमला आचार्यको मृ’त्यु प्रकरणको यथार्थ बाहिर न आउदैँ अहिले सोही स्थानमा अर्का एक ब्याक्तिको श’व फेला परेको छ । घाँ’स का’ट्न गएका स्थानियहरुले उक्त स्थानमा झु’न्डिए’को अवस्थामा श’व देखे पछि प्र’हरिलाई खबर गरेका थिए । एक हप्ता अघि मात्र कमला आचार्य पनि सोही स्थान नजिकै छ’टप’टाउदै गरेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनको मृ’त्यु निकै रह’स्य’मय तरिकाले भए पछि उनको मृ’त्युको अनु’सन्धान भै रहेकै अवस्थामा सोही स्थानमा अर्को श’व भेटिए पछि घ’ट’ना निकै रह’स्य’मय बनेको छ । अहिले श’व भेटिएका ब्याक्ती रतुवामाई १० सोमबारेका गोपालबहादुर श्रेष्ठ रहेको खुलेको छ । उनकी छोरी गोमा श्रेष्ठ खड्काका अनुसार आइतबार बिहानदेखि बुबा हिँडेको बताएकि छिन । आइतबार घरमा कसैलाई केही नभनी हिडेकाले कतै आफन्तकोमा जानुभएको हो...
भर्खरै जन्मिएको बच्चाको साँ’प्रा र खु’ट्टा चुँ’डा’एर झो’लामा फा’लिएको फे’ला(भिडियो हेर्नुस) तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका ९ मा पर्ने कबादी खोलाबाट एक जना भर्खरै जन्मिएको बच्चा फे’ला परेको छ । उक्त ब’च्चा’लाई झो’ला’मा राखेर फा’लिए’को अवस्थामा भेटिएको हो । ब’च्चा’को एउटा खु’ट्टा जंग’ली ज’नावारले खा’एको अवस्थामा भेटिएकोले त्यो बच्चालाई त्यहा १/२ दिन अगाडि फा’लिएको हुन सक्ने आं’श’का स्थानियको छ । ब’च्चा’को मृ’त्यु भै सके पछि फा’लिएको हो या जन्मिने बित्तिकै जि’उँदै हुँदा फा’लिएको हो भन्ने कुरा केही खुल्न सकेको छैन । उक्त बच्चाको श’रीर क्ष’त’बि’क्षे’त अवस्थामा भेटिएको छ । अहिले उक्त बच्चाको श’व प्र’ह’रीले लिएर गै सकेको छ । जिल्ल प्र’हरी तनहुँका अनुसार त्यसरी भेटिएको ब’च्चा’को अहिले पो’स्ट’मार्ट’म भै रहेको र घ’ट’नाबारे अनुसन्धान पनि सुरु गरि सकेको बताएको छ । उनलाई त्यहाँ कस्ले फा’लेको हो र उनक...
आफू भन्दा ३३ वर्ष कान्छी बिहे गरेका बाजे,जेठी श्रीमती र छोराछोरीहरु सम्झिँदै रो’ए(भिडियो हेर्नुस) पाचँथर जिल्लाको फिदिमका डिल्ली बहादुर मुखिया र सिर्जना लिम्बु अहिले सामाजिक संजाल टिकटकमा निकै चर्चामा छन । ३/४ दिन अघि मात्र बिबाह गरेका उनिहरु केही दिन भित्रमा नै टिकटकमा निकै भाइरल भएका जोडि हुन । उनिहरु यसरी भाइरल हुनुको कारण भने उनिहरुको बिबाह हो । डिल्लीबहादुरले आफ्नी नातिनिको उमेरकी सिर्जनासगँ माया प्रेम पछि बिबाह गरेकाले अहिले उनिहरु निकै चर्चामा छन । डिल्ली बहादुर र सिर्जना दुबैको यो दोश्रो बिबाह हो । सिर्जनाको भने यस अघिको श्रीमानबाट भएको एक बच्चा पनि रहेको छ । डिल्लीबहादुर आफुले पहिले पनि आफुले आफू भन्दा २० वर्ष जेठी श्रीमती बिबाह गरेको बताए । त्यो बेला आफुलाई कसैले केही नभनेको तर अहिले ३३ वर्ष कान्छी केटि बिबाह गर्दा भने नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेको बताए । आफ्नो जेठी श्रीमतिबाट ...
बैंक र टेलिकम सेवामा अनिवार्य गरिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण तीव्र रुपमा अगाडि बढाएसँगै सरकारले अब अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि यसलाई समावेश गर्दै लैजाने भएको छ । यसैक्रममा अब बैंक र टेलिकम सेवाहरूमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकालले टेकपानासँगको कुराकानीमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘हामीले हालै मात्र विद्युतीय पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेका छौँ ।’ अबको १५-२० दिनमा बैंकिङ सेवा तथा दूरसञ्चार सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र समावेश गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग दुई तीन पटक छलफलमा बसिसकेका छौँ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुको अर्थ मोबाइल तथा दूरसञ्चार सेवा लिन र बैंक खाता खोल्न समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अथवा त्यसको नम्बर आवश्यक प...
काठमाडौँ । छिमेकी भारतमा अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा पन्जाब सरकारले गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै हंगामा भइरहेको छ। बुधबार पन्जाबमा मोदीको सवारी भइरहेको सडक किसानले बाटो छेकेपछि उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै नगरी दिल्ली फर्किएका थिए। यही विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई भेटेका छन्। उनले कोविन्दलाई पन्जाबमा के भएको थियो भन्नेबारे आफैंले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उता पन्जाब सरकारले बिहीबार घटनाबारे अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। द हिन्दुका अनुसार उक्त उच्चस्तरीय समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यही विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट हालिएको छ। सर्वोच्चले उक्त विषयमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने भएको एनडिटिभीले जनाएको छ। भएको के थियो? मोदी बुधबार पन्जाब राज्यमा गएका थिए...